रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था को रोकथाम के हो?
हाल त्यहाँ थप र थप मान्छे रक्सी निर्भर छौं। र मान्छे को उमेर र सेक्स फरक छैन। अब युवा तिनीहरूलाई र तिनीहरूका सन्तानलाई रक्सीको खतराबाट भन्दा उपलब्ध उदाहरण व्याख्या गर्न, विद्यालय र विश्वविद्यालय मा रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था रोकथाम खर्च किन छ।
यो दृश्य स्पष्ट बिन्दु नराम्रो छ - तर, यो रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था र लागु पदार्थको लत को रोकथाम बच्चा बाल्यकाल देखि थाह छ कि यो छ कि परिवार मा बाहिर पर्छ भनेर सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि सडक र समाज तल उसलाई सही बाटो बाट गोली छैन।
सामान्य मा, सफलतापूर्वक र प्रभावकारी भएको थियो रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था रोकथाम गर्न पालन हुनुपर्छ जो सिद्धान्तहरू एक नम्बर छन्।
तपाईं घरमा रक्सी राख्न हुँदैन। यो छ - जो, घर रक्सी छ भनेर थाह पाउँदा छोराछोरी लागि खराब उदाहरण, हानिकारक पिउन के गर्न रूपमा आफ्नो सल्लाह लिन छैन। साथै, घर मा रक्सी पिउँछन् को उपलब्धता पिउने झुकाउ भएका र अतिरिक्त खर्च गर्न सक्छन् ती मानिसहरूको लागि एउटा प्रलोभन बन्नेछ।
वयस्क घर र काममा बस्न गर्दैन भने पनि मादक पदार्थ रोकथाम प्रभावकारी हुनेछ। त्यसपछि अस्तित्व र आत्म-बोध गर्न सकारात्मक उत्प्रेरणा छ।
एक व्यक्ति संग समस्या थियो भने रक्सी निर्भरता, तपाईं समस्या को कारण पहिचान गर्न र यसलाई समाधान गर्ने उपायहरू पत्ता लगाउन मदत गर्ने एउटा मनोवैज्ञानिक, जाने गर्नुपर्छ। यो रोग त्यहाँ अझै पनि छ कि पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण पनि छ, र यो उपचार गर्नुपर्छ। लामो रोगी उहाँले एक रोग छ भन्ने महसुस गर्दैन रूपमा, कुनै पनि उपचार निरर्थक हुनेछ। तपाईं सकारात्मक संग आफ्नो चारै ओर गर्न आफैलाई सकारात्मक बाटो सेट गर्न आवश्यक छ।
एक व्यक्ति जान्छ भने एउटा सक्रिय जीवन शैली, संस्कृति निरन्तर "व्यापार मा", उहाँले रक्सी पिउन इच्छा छ छैन, विकसित।
सार्वजनिक र चिकित्सा: सामान्य मा, एक समाजमा रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था को रोकथाम ऐतिहासिक दुई भागमा विभाजित।
रक्सी निर्भरता को सक्रिय रोकथाम, हुन हालतमा विभिन्न प्रयोग प्रयास लामो समय को लागि एक प्रशासनिक अधिकार रूपमा देश। त्यसैले, पहिले पनि रक्सी को बिक्री र प्रयोग प्रतिबन्ध सख्त व्यवस्था अपनाए। तर यो इच्छित परिणाम ल्याएको छ, र विपरीत प्रभाव गरायो।
रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था को रोकथाम, सार्वजनिक ठाउँमा मादक पेय को प्रयोग अधिक कानुनी र प्रशासनिक नियन्त्रण काममा (अनुपस्थिति हार्ड पिउने, झगडे, आदि संग सम्बन्धित) समावेश गर्नुपर्छ। तिनीहरू लागि मात्र होइन तर अरूको जीवन को लागि सम्भाव्य खतरा गठन किनकी, पाङ्ग्रा पिएको पछि बस्न गर्ने चालकहरुको सख्त सजाय।
चिकित्सा रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था रोकथाम रक्सीको प्रयोग कारण नोक्सानी को चिकित्सा कार्यकर्ता व्याख्या हुनुपर्छ।
एक पूर्ण स्वीकार्य मानक गर्न sobriety र सीमित रक्सी खपत: त्यहाँ रोकथाम दुई क्षेत्रमा छन्। मान्छे (खेलाडीहरूलाई, पूर्व alcoholics, समाज को गंभीर सदस्य, आदि) को मात्र सीमित सर्कल गर्न रक्सीको पूर्ण तिरस्कार। ठूलो उत्पादकत्व विधिहरू आत्माहरू एक उचित लाभ सीमा खपत संकेत कि को प्रयोग हुनेछ।
त्यहाँ जनसंख्यामा धेरै समूह तिनीहरूलाई बीच रक्सी निर्भरता को विकास को एक उच्च डिग्री छन्। यो रक्सी गर्न बलियो भएका मानिसहरूको परिवार सदस्यहरु, रक्सीको तत्काल वरपर काम गर्नेहरूलाई हुन सक्छ। उच्च जोखिम समूह बलियो पेय दुरुपयोग मानिसहरू हुन्। यस्तो व्यक्ति सामाजिक सेवाहरूको scrutiny अन्तर्गत निरन्तर हुनुपर्छ (तिनीहरूले औषधि लत र मनोवैज्ञानिक सक्रिय छन् जहाँ एक समुदायमा ल्याउन आवश्यक एक स्वस्थ जीवन शैली प्रचार र यसको लाभ)।
मानसिक आक्रमण: लक्षण र उपचार
तीव्र polymorphic psychotic विकार: कारण, लक्षण, उपचार
मास्को विद्यालय जिल्लाको मूल्यांकन
मोटरसाइकल Coffer: प्रकार। आफ्नो हातले coffer बनाउने
Pampers प्रीमियम हेरविचार 3: विवरण र समीक्षा
मास्को मा Moldovan दूतावास, तालिका र ठेगाना
5,00,000 लागि कार कस्तो किन्न? सम्भव विकल्पहरू
देखे ब्लेडको सिकार गर्दै: सिद्धान्त र तीव्रता कोण
यो श्रृंखला "Hatsapetovki को Milkmaid"। अभिनेता र भूमिकाको
जोड दिंदै "shatush": बाल रंग को एक नयाँ तरिका